iTunes Playlist n'efu efu - 3 Ụzọ ịrụzi Ọ
Ọ doro ikpe bụ otu n'ime ndị ụzọ gbanwee na iTunes nke nwere ọtụtụ ihe. Kasị nkịtị n'ime ihe niile bụ eziokwu na iTunes n'ọbá akwụkwọ ma ọ bụ software omume na-na-emelite ruru ka nke mweghachi a chọrọ. Eziokwu ahụ bụ na listi ọkpụkpọ anọwo na-ehichapụ accidently na mweghachi ka a dịtụ okenye ala a chọrọ kwa-eduga ná a onu. Ọzọ ọsọ mere nke n'eduba onye ọrụ iji weghachi iTunes bụ na transfer ọzọ ma ọ bụ usoro mpụga ngwaọrụ, a chọrọ n'aka ebe mbụ iTunes na-ahụ zigara na na na ọhụrụ usoro usoro na-etinyere iji weghachi iTunes.
Part1: Mgbe iji weghachi iTunes si ndabere?
Part2: Idozi efu iTunes listi ọkpụkpọ na otu agadi iTunes Music Library.xml
Part3: Weghachi okụrede iTunes playlist si gị iOS ngwaọrụ TunesGo
Part 1. Mgbe iji weghachi iTunes si ndabere?
E nwere ọtụtụ ụzọ na-eme ka n'aka na iTunes ndabere e weghachiri eweghachi nke mere na onye na-adịghị ga-eche ihu ọ bụla mbipụta na nke a. The akpachara anya ma ọ bụ preconditions na nke a bụ iji mee ka n'aka na ngwaọrụ na nke nkwado ndabere na mpaghara na-kere bụ free nke nje na ndị ọzọ na mbipụta. Dị ka a prekondishion ọ na-atụ aro ka mgbe ịmepụta ndabere na USB dabeere ngwaọrụ dị ka ha na-akọ Nyocha na nwere ike inwe rụrụ arụ na nke a. Iji mee ka ndị kasị mma ojiji nke usoro ọ na-gwara na-akpa-ịmepụta ndabere na mpụga ike mbanye na eme ka ahụ n'aka na nkwado ndabere na mpaghara na-ada na na nkịtị ojiji na kọmputa na-na-arụ ọrụ mere na imecha usoro. Esonụ bụ ụfọdụ n'ime nzọụkwụ na na-aka na nke a:
m. Tụgharịa na menu nke iTunes. A nwere ike mere site na ịpị top n'akụkụ aka ekpe nke iTunes n'ọbá akwụkwọ na-ahọpụta "Gosi menus". Alternatively ọ pụkwara mere site na ịpị CTRL + B na windo. N'ihi na Mac na menus na agbanwu ndabara:
ii. Ugbu a onye ọrụ kwesịrị ka-eso ụzọ Dezie> mmasị> tupu si menus na e tụgharịa on:
III. Ebe a na onye ọrụ nwere iji họrọ nhọrọ nke "Copy faịlụ ka iTunes Media nchekwa mgbe na-agbakwụnye na nchekwa." Ọ ga-ekwe ka iTunes ike a oyiri n'ime iTunes media nchekwa-ahapụ ihe niile mbụ faịlụ ebe ha bụ ndị. Na ndị ọzọ okwu akpaka ndabere ga-kere dị ka nke ọma:
too ogologo. Ugbu a nhọrọ nke inokota faịlụ na mgbe ahụ OK bụ na-enwe na-eme ka n'aka na igba-agwụ agwụ. Ụzọ na-a ga-agbaso bụ File> Library> hazie n'ọbá akwụkwọ
v. Nke a ga-eme ka niile iTunes bụ n'otu ebe na data na-ekpokọtara. Ka ịmepụta ndabere na mpụga ike mbanye onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na ụzọ menus> Dezie> mmasị> elu a họọrọ otu ugboro ọzọ ịhụ na ọnọdụ nke iTunes media nchekwa:
vi. Eso otu ụzọ na iTunes nchekwa bụ na-dọkpụụrụ ka mpụga ike mbanye:
VII. Ozugbo nyefe na dechara iTunes Library bụ ọma depụtaghachiri ka mpụga ike mbanye. Iji weghachite iTunes site na nke a ndabere ọ na-achọrọ iji jide n'aka na mpụga ike mbanye na-emi odude otu ugboro ọzọ. Na Mac a mbanye na-emi odude na desktọọpụ ebe windows a mbanye na emi odude ke kọmputa m. Ozugbo emi odude nkwado ndabere na mpaghara nke e ịchekwa jidesie a drvie bụ-depụtaghachiri na pasted ka chọrọ ebe ke kọmputa. Mgbe na-ejide Mgbanwe isi onye ọrụ kwesịrị imeghe iTunes n'ọbá akwụkwọ nke mere na ndị na-esonụ ozi na-egosi site na nke onye ọrụ nwere iji họrọ nhọrọ nke na-ahọrọ n'ọbá akwụkwọ na mgbe ahụ họrọ chọrọ nchekwa na e kpaliri-adịbeghị anya mezue usoro.
Part 2. Idozi efu iTunes listi ọkpụkpọ na otu agadi iTunes Music Library.xml
Iji nweta na-aga na usoro a ọ bụ nnọọ mkpa iburu n'obi na ụfọdụ oru nkọwa na-aka na mkpokọta usoro ekwesịghị rụrụ na-enweghị otu ọkachamara ndụmọdụ:
m. Mechie iTunes software kpamkpam na-emeghe iTunes music nchekwa. On Mac ọ bụ / Music / na windows na ọ bụ \_ My Documents \_ My Music \_ iTunes \_ ma ọ bụ \_ Aha ojii \_ My Music \_.
ii. Onye ọrụ ahụ nwere na-eme ka n'aka na iTunes n'ọbá akwụkwọ na nchekwa ma ọ iTunes music library.xml na-dọkpụụrụ jidesie desktọọpụ:
III. Ugbu a iTunes bụ na-re-ulo oru na tupu ọ bụla ọzọ ọrụ a rụrụ na music n'ọbá akwụkwọ a ga-dị na enyemaka nke faịlụ> n'ọbá akwụkwọ> Bubata ndepụta:
too ogologo. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ijide n'aka na iTunes Music Library.xml faịlụ na-emi odude na dị n'ime iTunes mere na listi ọkpụkpọ na-synced otu ugboro ọzọ. Ọ bụla ọzọ na ngwaọrụ na e synced na iTunes software omume ga-emekwa ka n'aka na ha listi ọkpụkpọ na-synced ozugbo ha jikọọ ọzọ. Nke a na-completes usoro.
Part 3. Weghachi okụrede iTunes playlist si gị iOS ngwaọrụ TunesGo
TunesGo bụ otu nke kasị mma software omume nke jide n'aka na okụrede iTunes playlist e weghachiri eweghachi na dị nnọọ ole na ole clicks na ọ dịghị ọrụ ike abuana na nke a. Iji mee ka ndị kasị mma ojiji nke usoro ọ na-gwara iji jide n'aka na nsogbu ahụ na-kwara na a n'ụzọ na-bụ oru oma ma dị irè na ọ dịghị ọzọ software omume e wezụga TunesGo ndị dị otú ahụ irè. Na-esonụ bụ usoro kwuru:
m. The onye ọrụ nwere ibudata software si URL http://www.wondershare.com/tunesgo/ ma ọ bụ na-eduzi ebe a na-eso kpaliri iji jide n'aka na ọ na-ibudatara na arụnyere. Ozugbo ọ e mere isi interface-egosi:
ii. The IOS ngwaọrụ bụ na-jikọọ na PC ma ọ bụ Mac iji jide n'aka na software na-achọpụta rụọ ya na-egosiputa results:
III. Na ekpe panel onye ọrụ kwesịrị ka pịa listi ọkpụkpọ iji jide n'aka na niile listi ọkpụkpọ na-synced na ngwaọrụ na-egosipụta. Họrọ listi ọkpụkpọ na chọrọ onye ibubata wee pịa Detuo na iTunes Akwụkwọ:
too ogologo. Nke a ga-nyefee niile listi ọkpụkpọ na iTunes Ọbá akwụkwọ na ga-emekwa ka n'aka na usoro okokụre ebe a. A dị oke egwu mpempe technology na-eme ka n'aka na needful a mere n'ime chaachaa ikwe ka onye ọrụ ga-esi n'ime ụgbọala oche.
> Resource> iTunes> 3 Ụzọ iji weghachi iTunes listi ọkpụkpọ